5 Eo an-toerana tsara indrindra Sweets To Try In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Eo an-toerana tsara indrindra Sweets To Try In Eoropa
Local zava-mamy avy amin'ny karazany maro manerana an'i Eoropa. Firenena sy ny faritra rehetra manana ny kely Fifaliana mirehareha izy ireo mba hanolotra. Ho mpizaha tany amin'ny hanitra nify, tsy misy na inona na inona mahasarika kokoa noho ny vaovao momba ny nandeha tiany. Ireto ny ambony 5 tsara indrindra ao an-toerana mba hanandrana zava-mamy ao Eoropa.
1. A Local Sweet – Mozartkugel, Salzburg, Aotrisy
Iray amin'ny malaza indrindra sy ny zava-mamy an-toerana malaza any Eoropa no Mozartkugel. Araka ny fantatsika, Paul Furst namorona fomba fahandro tany am-boalohany ao amin'ny Salzburg ny zato taona lasa izay. Izy io dia sosona sôkôla Fifaliana amin'ny pistachio maitso sy ny nougat.
Misy orinasa maromaro-nanao teti-bola dikan-, ary afaka mahita azy ireo ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe. Na izany aza, tany am-boalohany dia tsy dikan- lafo loatra, ary tsy hanenenana ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny. ankapobeny, dia iray amin'ireo tsara indrindra eo an-toerana mba hitondra an-trano zava-mamy avy amin'ny Aotrisiana diany.
2. A Local Sweet – donuts, Berlin, Alemaina
Tsy voatery namatotra ny lelanao amin'ny a knot mba milaza ny anaran 'ilay mamy an-toerana. Hanafohezany ilay olona ivelan'ny azy ireo Berliner Berlin, ary ny pancakes in Berlin. Tsy toy ny American donuts, tsy manana nisy loaka teo amin'ny foibe. Rehefa manaraka ny fomba fahandro nentim-paharazana, ianao hahazo matsiro bola ny mamy, feno Jak na marmalade, miaraka amin'ny siramamy icing.
stroopwafel dia iray amin'ireo zava-mamy indrindra eo an-toerana iray mampiankin-doha Afaka mahita any Eoropa. Tsy toy ny zava-mamy hafa maro, tsy misy adihevitra momba izay avy Ny Fomba Ahitana sady misy. Mpanao mofo tao an-tanànan'i Zavatra Gouda voalohany dia nahary azy ho. Noho izy ireo entana sy mandeha tsara, dia ho fahatsiarovana tsara.
Ny mofo manify roa nitondra niaraka tamin'ny caramel "lakaoly" mahatonga ny olona iray Stroopwafel. Na dia tsy misy kilema manokana, ny mahatonga azy ireo eran-antso iray amin'ireo tsara indrindra eo an-toerana zava-mamy. Ireo zava-mamy manao sakafo maivana tanteraka rehefa lava andro fiaran-dalamby-hopping, fiantsenana, sy ny hazakazaka am-bisikileta dodging - Amsterdam mampiavaka hetsika rehetra.
4. Danoà mofomamy, Copenhagen, Danemark
Na dia kely aza Danemark, ny angano ny tsara indrindra ao an-toerana ny zava-mamy mandeha hatraiza hatraiza. Danoà mofomamy nandeha tany Danemark tamin'ny vondrona Aotrisiana mpanao mofo. Mazava ho azy, dia farany ny fomba fahandro nandritra ny taona maro, ary maro skandinavianina mpifindra monina nentiny tany Amerika. Na izany aza, dia hankafy azy indrindra ao amin'ny firenena izay ny mpanao mofo vita fanoloran-tena tanteraka izany.
Eo an-toerana io Danoà mamy dia iray amin'ireo zavatra mampirehitra dia hanandrana. Mpanao mofo ambony izany eny amin'ny Jak, fromazy, na fanosotra ny manome fa tanteraka skandinavianina flair. Na dia izany manan-karena amin'ny tsirony sy ny kaloria, taorian'ny andro trandrahana Copenhagen ao amin'ny oram-panala, ianao, dia hahazo ny amin'izay toetra.
5. Cuberdon, Belzika
Cuberdon no iray amin'ireo tsara indrindra sy mazava indrindra ao an-toerana any Eoropa zava-mamy. Izany dia miendrika satroka, matetika lamba volomparasy sy feno Raspberry famenoana. Rehefa manaikitra ao anatin'ny anankiray, ny nify malefaka Ampidironareo ao amin'ny famenoana afovoany mora foana. Matetika izy ireo no milaza izany Belzika tsara indrindra-afenina. Satria sarotra ny hiarovana izany rehefa afaka herinandro vitsivitsy, Don izy ireo tsy manondrana izany matetika. Na izany aza, ho an'ny mpizaha tany izay te hanandrana zavatra tsy manam-paharoa, ary ento mody, ny cuberdon tanteraka.
Tianao ve ny hanampy ny sasany siramamy sy ny zava-manitra eo amin'ny fiainanao, ary maka fiaran-dalamby sakafo fitetezam-paritra ny alalan 'Eoropa? Boky ny Tickets Today!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Eo an-toerana tsara indrindra Sweets To Try In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Danemark #sweets sôkôla eurotrip travelaustria travelbelgium travelgermany travelnetherlands